शान्ति प्रक्रियामा प्रचण्ड नायक कि खलनायक ? (भिडियो सहित)
काठमाण्डौ । नेपाली राजनीतिका समकालिन नेतामध्ये पुष्पकमल दाहालको नाम नीकै चर्चित छ । १० वर्षे जनयुद्ध गरेर देशलाई संघीय राज्य प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न उनको योगदान नेतृत्वदायी रहयो । माओवादी जनयुद्धकै
विद्यार्थी को अश्लिल भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेल गर्ने प्रोफेसर होटलबाटै पक्राउ, युवतिको उद्धार ! (भिडियो सहित)
काठमाडौं । नेपालका प्रतिष्ठित कलेजहरुमा म्यानेजमेन्ट पढाउँदै आएका भारतीय नागरिक वि.एस. गौतम भनेर चिनिने बोधीसत्व गौतम भट्टाचार्यले आफ्नै विद्यार्थी र किशोरीहरुलाई ब्ल्याकमेल गरि यौन शोषण गर्दै आएको खुलेको छ ।
को हुन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको छेउमा देखिने यी ब्यक्ति ? जसको एक आवाजमा लाखौं युवा एकत्रित हुन्छन (भिडियो सहित)
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छेउमा देखिने यी ब्यक्ति को होलान ? प्रधानमन्त्री मोदीसँगै सामान्य पहिरनमा देखिएका यी व्यक्ति हेर्दा सर्वसाधारण गाउँले जस्ता देखिएपनि यिनको व्यक्तित्व भने असामान्य खालको छ ।
काठमाडौं । नेपाल घुम्न आएकी नेपाली मुलकी बेलायती युवती गंगा थापाले राजधानीको फोहोर र प्रदुषणले राज्यलाई गिज्याइ रहेको बताएकी छिन्। चक्रपथ सफाई अभियानको ६६औ हप्ताको सफाइ अभियानमा सहभागी हुँदै थापाले
भारतीय चर्चित शो सारेगामापामा नेपालकी मेनुकाको अर्को कमाल !, प्रीति जिन्टा पनि फ्यान, अर्को चरणमा प्रवेश (भिडियो सहित)
काठमाडौं । नेपालकी एक युवती मेनुका पौडेल अब पहिचानका लागि कुनै विशेषण थप्नु पर्ने अवस्थामा छैनिन् । नेपालको नेपाल आईडलबाट आउट भएपछि भारतीय रियालिटी शो सारेगामापामा प्रवेश गरेकी उनी लगातार
निर्मला हत्या प्रकरण : बम दिदीबहिनीका बाबु पहिलोपटक मिडियामा !, निर्मलाको परिवारसँग यस्तो आक्रोश (भिडियो)
थप चारको डिएनए मिलेन: कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–२ की १३ वर्षीया निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पठाएको थप चार जनाको डिएनए रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको छ । घटनामा संलग्न हुनसक्ने आशमा
चितवनमा भेटिएका अचम्मका व्यक्ति !, यस्तो छ अरुभन्दा फरक देखिन खोज्ने फुर्साङको कहानी (भिडियो सहित)
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन पछिल्लो समय मानिसले अनेक तरिका रचिरहेका छन् । अधिकांश व्यक्ति आफ्नो प्रतिभाका कारण नै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका देखिन्छन् । शारिरीक बनोटका साथै प्रतिभाका कारणले पनि
विद्यार्थी लुट्ने चितवन मेडिकल कजेललाई कसले कार्वाही गर्ने ?, भ्रष्टचारीलाई नांगेझार पार्दै ‘म पनि’ अभियान (भिडियो सहित)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३०२ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको यस विशेष एपिसोडमा पनि विभिन्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । आजको एपिसोडमा निम्न
कैलालीमा भेटिइन अर्को प्रतिभावान वालिका !, ५ वर्ष देखि हराएको बुबा सम्झदै गाइन सबैलाई रुवाउने गीत – हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाण्डौ । प्रतिभावान ब्याक्तित्वहरु बेला बेला मिडीयामा अत्याधिक छाऊने गर्छन । यस्तैमा भर्खरै कैलालीस्थित लम्की भन्ने ठाऊकी एक प्रतिभावान वालिकाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छाऊन थालेको छ । ती प्रतिभावान बालिका
रविले अघि सारे गज्जबको आइडिया- भ्रष्ट्राचार उन्मुलनमा ‘म पनि’ अभियान चलाऔं (भिडियो सहित)
काम सजिलो हुन्छ भने २/४ पैसा खुवाउनुलाई कसैले पनि ठुलो कुरा नै मान्दैनन् हाम्रो नेपालमा । नेता र कर्मचारीहरु चाँही अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरियाका जस्ता चाहिने अनि जनता चाँही यस्तै